Vatongi 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
6 Zvino vanakomana vaIsraeri vakatanga kuita zvakaipa pamberi paJehovha.+ Naizvozvo Jehovha akavaisa muruoko rwaMidhiyani+ kwemakore manomwe. 2 Ruoko rwaMidhiyani rwakakunda Israeri.+ Vanakomana vaIsraeri vakazviitira nzvimbo dzokuchengetera zvinhu pasi pevhu dzaiva mumakomo, nemapako nenzvimbo dzakaoma kusvika+ nokuda kwaMidhiyani. 3 VaIsraeri vaiti kana vakadyara mbeu,+ Midhiyani naAmareki+ neVokumabvazuva+ vaiuya, chokwadi vaiuya kuzovarwisa. 4 Vaidzika musasa pakatarisana navo, vaiparadza zvibereko zvevhu kusvikira kuGaza, uye vaisasiya zvokudya chero zvipi zvazvo kana makwai kana nzombe kana mbongoro pakati paIsraeri.+ 5 Nokuti vaiuya ivo nezvipfuwo zvavo nematende avo. Vaiuya vakawanda semhashu,+ ivo nengamera dzavo vaiva vasingaverengeki;+ uye vaipinda munyika yacho kuti vaiparadze.+ 6 Israeri akava murombo kwazvo nemhosva yaMidhiyani; uye vanakomana vaIsraeri vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe.+ 7 Zvino nokuti vanakomana vaIsraeri vakashevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe pamusoro paMidhiyani,+ 8 Jehovha akatuma mumwe murume, muprofita,+ kuvanakomana vaIsraeri kuti ati kwavari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Ndini ndakakubudisai muIjipiti+ ndikabva ndakubudisai muimba yevaranda.+ 9 Naizvozvo ndakakununurai muruoko rweIjipiti nomuruoko rwevadzvinyiriri venyu vose, ndikavadzinga pamberi penyu, ndikakupai nyika yavo.+ 10 Uyezve, ndakati kwamuri: “Ndini Jehovha Mwari wenyu.+ Musatya vanamwari vevaAmori+ vamugere munyika yavo.”+ Asi hamuna kuteerera inzwi rangu.’”+ 11 Gare gare ngirozi yaJehovha yakasvika,+ ikagara pasi pomuti mukuru waiva muOfra, waiva waJoashi wevaAbhi-ezeri,+ Gidhiyoni+ mwanakomana wake paaipura gorosi muchisviniro chewaini kuti akurumidze kuribvisa rirege kuonekwa naMidhiyani. 12 Ngirozi yaJehovha yakabva yazviratidza kwaari ikati: “Jehovha anewe,+ iwe munhu akashinga, ane simba.” 13 Gidhiyoni akati kwairi: “Pamusoroi, ishe wangu, asi kana Jehovha ainesu, zvino nei zvose izvi zvatiwira,+ uye mabasa ake ose anoshamisa+ ari kupi atakarondedzererwa nemadzibaba edu,+ vachiti, ‘Jehovha haana kutibudisa muIjipiti here?’+ Zvino Jehovha atisiya,+ uye ari kutiisa muchanza chaMidhiyani.” 14 Jehovha akamutarira akati: “Enda nesimba rako iri,+ uye uchaponesa Israeri muchanza chaMidhiyani.+ Handisi kukutuma here?”+ 15 Iye akatiwo kwaari: “Pamusoroi, Jehovha. Ndichaponesa Israeri nei?+ Tarirai! Chiuru changu ndicho chiduku pakati paManase, uye ndini muduku muimba yababa vangu.”+ 16 Asi Jehovha akati kwaari: “Nokuti ndichava newe,+ uye uchauraya Midhiyani+ sokunge munhu mumwe chete.” 17 Iye akati kwaari: “Zvino, kana mandinzwira nyasha,+ ndiitireiwo chiratidzo chokuti ndimi muri kutaura neni.+ 18 Ndapota, musabva pano kusvikira ndauya kwamuri+ uye ndabudisa chipo changu, ndachiisa pamberi penyu.”+ Naizvozvo iye akati: “Ini ndicharamba ndakagara pano kusvikira wadzoka.” 19 Zvino Gidhiyoni akapinda, akagadzira mbudzana+ uye efa yefurawa kuva makeke asina kuviriswa.+ Nyama yacho akaiisa mutswanda, muto akauisa muhari yokubikira, akabva azvibudisa, akaenda nazvo kwaaiva pasi pomuti mukuru, akamupa. 20 Zvino ngirozi yaMwari wechokwadi yakati kwaari: “Tora nyama nemakeke asina kuviriswa uzviise padombo guru apo,+ udurure muto wacho.” Iye akaita saizvozvo. 21 Ngirozi yaJehovha yakabva yatambanudza muromo womudonzvo waiva muruoko rwayo, ikagunzva nyama nemakeke asina kuviriswa, moto ukatanga kubuda padombo ukapisa nyama nemakeke asina kuviriswa.+ Asi ngirozi yaJehovha yakanyangarika akasaiona. 22 Naizvozvo Gidhiyoni akaziva kuti yaiva ngirozi yaJehovha.+ Gidhiyoni akabva ati: “Ndine nhamo, Changamire Ishe Jehovha, nokuti ndaona ngirozi yaJehovha chiso nechiso!”+ 23 Asi Jehovha akati kwaari: “Iva norugare.+ Usatya.+ Hauzofi.”+ 24 Naizvozvo Gidhiyoni akavakira Jehovha atari+ ipapo, uye ichiri kunzi+ Jehovha-sharomu kusvikira nhasi. Ichiri muOfra+ yevaAbhi-ezeri. 25 Zvino usiku ihwohwo Jehovha akati kwaari: “Tora nzombe duku, nzombe yababa vako, kureva nzombe duku yechipiri ine makore manomwe, uputse atari yaBhaari+ yababa vako, uteme danda dzvene riri pedyo nayo.+ 26 Uvakire Jehovha Mwari wako atari pamusoro penhare iyi, nematombo akarongwa mumutsara, utore nzombe duku yechipiri woipa sechinopiwa chinopiswa pahuni dzedanda dzvene rauchatema.” 27 Naizvozvo Gidhiyoni akatora varume gumi pavashandi vake, akaita sezvaakanga ataurirwa naJehovha;+ asi zvaainyanya kutya imba yababa vake nevarume veguta kuti azviite masikati, akazviita usiku.+ 28 Varume veguta pavakafumomuka senguva dzose, vakaona atari yaBhaari yaputswa nedanda dzvene+ raiva pedyo nayo ratemwa, uye nzombe duku yechipiri yakanga yabayirwa paatari yakanga yavakwa. 29 Vakatanga kutaurirana vachiti: “Ndiani aita chinhu ichi?” Vakabvunza uye vakatsvaka. Vakazoti: “Gidhiyoni mwanakomana waJoashi ndiye aita chinhu ichi.” 30 Naizvozvo varume veguta vakati kuna Joashi: “Budisa mwanakomana wako kuti afe,+ nokuti aputsa atari yaBhaari, uye nokuti atema danda dzvene ranga riri pedyo nayo.” 31 Joashi+ akati kuna vose vakasimuka kuti varwisane naye:+ “Ndimi mucharwira Bhaari nomutemo kuti muone kana imi mungamuponesa here? Munhu wose anomurwira nomutemo anofanira kuurayiwa iwo mangwanani ano.+ Kana ari Mwari,+ ngaazvirwire nomutemo,+ nokuti mumwe munhu aputsa atari yake.” 32 Zvino akatanga kumuti Jerubhaari+ pazuva iroro, achiti: “Bhaari ngaazvirwire nomutemo, nokuti mumwe munhu aputsa atari yake.”+ 33 Zvino vaMidhiyani+ vose nevaAmareki+ neVokumabvazuva+ vakaungana pamwe chete,+ vakayambuka, vakadzika musasa mubani reJezreeri.+ 34 Mudzimu waJehovha+ wakafukidza Gidhiyoni zvokuti akaridza hwamanda,+ vaAbhi-ezeri+ vakaungana, vakamutevera. 35 Akatuma nhume+ kuna Manase wose, ivowo vakaungana, vakamutevera. Akatumawo nhume kuna Asheri naZebhuruni naNaftari, vakauya kuzosangana naye. 36 Gidhiyoni akabva ati kuna Mwari wechokwadi: “Kana muri kuponesa Israeri muchindishandisa, sezvamakapikira,+ 37 tarirai ndiri kuita kuti nguo yemvere dzemakwai ive pachena paburiro. Kana dova rikava panguo chete asi pasi pose pakaoma, ndichabva ndaziva kuti muchaponesa Israeri muchindishandisa, sezvamakapikira.” 38 Uye zvakaitika saizvozvo. Paakafumomuka zuva rakatevera racho, akasvina nguo, akasvina dova panguo raigona kuzadza mudziyo mukuru nemvura. 39 Asi Gidhiyoni akati kuna Mwari wechokwadi: “Musanditsamwira kwazvo, asi regai nditaurezve kamwe chete. Ndapota, regai ndiedzezve nenguo kamwe chete. Ndapota, nguo chete ngaive yakaoma, uye pasi pose ngapave nedova.” 40 Naizvozvo Mwari akaita saizvozvo usiku ihwohwo; uye nguo ndiyo chete yakanga yakaoma, asi pasi pose paiva nedova.